बाबुले भने : ‘मैले साउन देखि छोरीसँग नियमित सम्पर्क गर्दै आएको हुँ, पेटमा भएको बच्चा मेरै हो’ ! अस्पतालमा भएकी छोरीको बयानले आमा झस्किन ! – live 60media
बाबुले भने : ‘मैले साउन देखि छोरीसँग नियमित सम्पर्क गर्दै आएको हुँ, पेटमा भएको बच्चा मेरै हो’ ! अस्पतालमा भएकी छोरीको बयानले आमा झस्किन !
← आज एकैदिन ३१४ जना संक्रमित थपिए, कुन जिल्लामा कति ? हेर्नुहोस्
कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन गर्न जाँदा पोखरामा भयो डरलाग्दो घटना, स्थानीयवासी चकित ! ४ प्रहरी पनि घाइते भएर फर्किए →